Ulwandle lwaseScauri phakathi kweRoma neNaples - I-Airbnb
Ulwandle lwaseScauri phakathi kweRoma neNaples
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLara
Indlu entle ebekwe kumbindi weScauri, idolophu ekumazantsi eLazio ejonge kunxweme loLwandle lwaseTyrrhenian. Indawo yobuchule njengesiqalo sokuthatha uhambo kunye nohambo ukuya kwezona ndawo zintle kumbindi-mazantsi eItali: iRoma, iNaples, iPompeii, iCapri, iIschia ..etc
Indawo yokuhlala inamanyathelo ambalwa ukusuka elwandle kwaye ekhanyayo, kunye ne-balcony ejongene nolwandle, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye nempahla, igumbi lokuhlambela elineshawa. Nge-WI FI kwaye ixhotyiswe ngetanki yamanzi eyi-1000 litre
IRoma 1.45h ngololiwe, eNapoli imizuzu engama-45, imizuzu eli-10 ngemoto yokukhwela iPonza kunye nesiqithi saseVentotene, imizuzu eyi-15 ngemoto yeeBhafu zesulfure, imizuzu engama-50 yokukhwela ukuya eIschia naseCapri Islands-
ibhasi okanye imoto: imizuzu eli-10 ukuya eFormia-imizuzu engama-20 ukuya eGaeta-imizuzu engama-40 ukuya eSperlonga yokupaka simahla
Ulwandle kunye neMbali! Indawo yokuhlala iimitha ezingama-20 ukusuka elunxwemeni, emva koko unokuhamba intaba kwipaki yeNgingqi yaseGianola-Riviera di Ulisse, tyelela isixeko samandulo saseMinturno kunye nethiyetha yaseRoma. Kwidolophu ekufutshane yaseFormia, kumgama nje weekhilomitha ezimbalwa, ungaqalisa ukutyelela iziqithi ezihle zaseVentotene nasePonza. Enye indawo yabakhenkethi etyebileyo ngamatye ezikhumbuzo sisixeko esihle nesinembali saseGaeta (malunga neekhilomitha ezingama-20).
Ummandla apho ifulethi likhona liphakathi kakhulu kwaye liqhagamshelwe kakuhle: ecaleni kwendlela kukho iivenkile ezahlukeneyo kunye neevenkile ezinkulu, imivalo, iipizza.
Umbuki zindwendwe ngu- Lara
Amo molto l'Arte, la Natura, viaggiare, conoscere la gente e la gastronomia dei posti in cui vado
Kuyo nayiphi na ingxaki okanye ulwazi ungalibazisi ukunxibelelana nam